(Q-1)FASTGO တွင်ကော်မရှင်ခ ကောက်ခံပါသလား?
FASTGO တွင် ကော်မရှင်ခ မကောက်ခံပါ။ ပထမဦးဆုံး စာရင်းပြုလုပ်၍ အကျိုးတူပူးပေါင်းသူ (Fast Car) အယောက် ၅၀၀ သည် FASTGO အသုံးပြုခ ကော်မရှင်ခများကို တစ်နှစ်လုံးစာအတွက်ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ စာရင်းပြုလုပ်သူ ၅၀၁ ယောက်မှစ၍ နေ့စဉ်အသုံးပြုခများကို အောက်ပါအတိုင်းပေးချေရပါမည်။ Card and Credit Card ဖြင့်ငွေပေးချေပါက Transaction ခ ၃% ကို FASTGO သို့ထပ်မံပေးဆောင်ရပါမည်။
(Q-2)FASTGO ဖြင့် ငွေပေးချေမှု?
ငွေသားဖြင့် ငွေပေးချေမှုကို ခရီးစဉ်တစ်ခု အပြီးတွင် ပေးချေရရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် Visa/Master ဖြင့်ငွေပေးချေမှုများအတွက် ခရီးစဉ်ပြီးဆုံးချိန်တွင် FASTGO Driver ၏အကောင့်ထဲသို့ လွှဲပြောင်းပေးချေပါမည်။ FASTGO Driver ၏အကောင့်ထဲတွင်ရှိသော ပိုက်ဆံပမာဏသည်……..............ထက်ကျော်လွန်နေပါက Driver ၏ ကိုယ်ပိုင် Bank အကောင့်ထဲသို့ ၂ ရက်တွင်း (Bank အခြေအနေပေါ်မူတည်၍) လွှဲပြောင်းပေးပါမည်။
(Q-3)FASTGO မှ Driver များအား မည်သည့်ဝန်ဆောင်မှုများဆောင်ရွက်ပေးပါသလဲ?
FASTGO မှ Driver များအား အောက်ပါဝန်ဆောင်မှုများဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ၁.Driver သည် FASTGO သို့ဝင်ရောက်သောအခါ အနည်းဆုံး ခရီးစဉ် ၂၅ ခေါက်ပို့ဆောင်ပြီးစီးမှသာ အစားအသောက်အဆိပ်သင့်ခြင်းနှင့်ပတ်သတ်သောအာမခံမှုရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ၂.အကယ်၍ FASTGO Driver သည် တစ်လ ၁၀၀,၀၀၀ နှုန်းဖြင့် ကားမောင်းခြင်းအတွက်အာမခံဝင်ထားပါက သတ်မှတ်ထားသော ဆေးရုံများတွင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ အကယ်၍မမျှော်လင့်ပဲ အာမခံထားသော Driver သည်ဆေးရုံတက်ခဲ့ရပါက အလုပ်မဲ့အာမခံကြေး လစဉ် ၁၀၀,၀၀၀ အားရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၃.Driver သည်ယာဉ်မတော်တဆမှု တစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပွားခဲ့ပါက FASTGO ထံမှပြင်ဆင်စရိတ်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
(Q-4)FASTGO အား ဝင်ရောက်ခြင်းအားဖြင့် မည်သည့်အာမခံဝယ်ယူမှုအခွင့်အရေးကိုမဆို ရရှိနိုင်ပါသလား?
FASTGO တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူအနေဖြင့် PTI မြို့ပြတာဝန်ယူမှုအာမခံအား ဝယ်ယူခြင်းအားဖြင့်၂၀၀,၀၀၀ အားရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင့်အနေဖြင့် အာမခံဝယ်ယူခြင်းအား FastCar Driver များအားပိုမိုမိတ်ဆက်ပေးနိုင်ပါက ၅၀,၀၀၀ဖြင့်ကမ်းလှမ်းခံရနိုင်ပါသည်။ Driver များသည် အောက်ပါလင့်မှတစ်ဆင့် FASTGO တွင်မှတ်ပုံတင်နိုင်ပါသည်။ https://fastgo.mobi/driver?refsource=PTI မြို့ပြတာဝန်ယူမှုအာမခံအား ဝယ်ယူခြင်းအားဖြင့် ၂၀၀ ကျပ်ရယူလိုက်ပါ။
(Q-5)Driver များအတွက် အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်းများနှင့်ဆုများအကြောင်းကို မည်သည့်နေရာများတွင် သိရှိနိုင်ပါသနည်း?
FASTGO တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူအနေဖြင့် အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်းများနှင့်ဆုများအကြောင်းကို အပတ်စဉ်ပေးပို့သော အီးမေးများနှင့် FASTGO DRIVER application များမှတစ်ဆင့်သိရှိနိုင်ပါသည်။